IMayo Glamping-Liosachan (Hobbit Hut)
Igumbi lakho lokulala e indlu yodaka sinombuki zindwendwe onguStephen
Ngaba wakha wazibuza ukuba kuya kuba njani ukuhlala njenge-hobbit phantsi komhlaba? Indlu yethu encinci, egqunywe ngumhlaba intle kwaye ithambile, ilala ukuya kuthi ga kubantu aba-4 (ibhedi e-1, ibhedi yosuku olunye). Siphumle kwisauna yethu eyenziwe ngamaplanga kunye ne-tub eshushu*, pheka ipizza okanye utshise i-BBQ kwindawo yethu yekhitshi engaphandle kwaye uthobe iimarshmallows kwiindawo zethu zomlilo. Kukho ikhitshi elidityanelweyo, indlu yangasese kunye neeyunithi zokuhlambela kwindawo.
** Ibhafu eshushu efumanekayo ngesicelo, iindawo zokubeka iyure ezi-1 zabucala ziyafumaneka
Ifakwe kwiinduli eziqengqelekayo kumbindi welizwe laseMayo yeyona ndawo ifanelekileyo yokubalekela kuphithizela kubomi bemihla ngemihla. Izindlu zethu ze-hobbit ziphangalele kwaye zithokomele ngophahla lwazo lwengca eluhlaza, iifestile ezingqukuva kunye neengcango uya kuziva ukwilizwe elahlukileyo. Hlala ngaphandle kwaye uthobe iimarshmallows kwindawo yomlilo, khazimla kubusuku obuzolileyo, wonwabele ukumisa inkampu ngabo bonke ubutofotofo!
4.93 · Izimvo eziyi-264
Siyimizuzu emi-5 ukusuka kwiMyuziyam yeSizwe yobomi beLizwe ukuba unokujikeleza okanye uhambe ngeCastlebar/Turlough Greenway. siyimizuzu engama-25 yokuqhuba ukuya eWestport okanye eBallina kunye nemizuzu eyi-15 ukusuka Foxford. kukho inani leendlela zokuhamba kwindawo enendawo entle
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Castlebar